Mmachi ndị uwe ojii na - eyi kamera | Ngwọta OMG
Uru Ahụ Worn Cameras:
Ahụ Nwa Ara ahụ nyere aka nke ukwuu na ndụ onye uwe ojii kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị hụrụ nke ọma, mgbe ahụ anyị ga - ahụ ọtụtụ uru dị na ngwaahịa a. Ọ na-eme dị ka anya nke atọ n'ụzọ site na ịbawanye n'echiche nke onye ahụ. Enwere ike ikwu ya n'ihi na mgbe ụfọdụ mmadụ anaghị ahụ obere nkọwa zuru ezu gbara ya gburugburu. Mana iji igwefoto ahụ, ọ nwere ike ịhụ nke ahụ ugboro ugboro na-eme ka ọ dịrị ya mfe ịkọwa obere nkọwa.
Ihe Mmachi nke Ahụ Nwa Atụrụ Ahụ:
Ewezuga uru dị iche iche nke igwefoto yi ahụ nwere, ọ nwere ọtụtụ ihe oke.
Ka anyị nyocha ngwa ngwa maka adịghị ike nke Ahụ Ahụ Worn Cameras:
Ọ bụ otu n'ime nsogbu kachasị nke ngalaba ndị uwe ojii na-eche ihu ugbu a ụbọchị. Nke a bụ mmachi kachasị nke eserese eji eyi. Ofdekọ data site na ebe ndị omekome adịghị mkpa mana igwu egwu ogologo oge na-achọkwa ọtụtụ ebe nchekwa. Nke a na - eme ya nnukwu mmachi nke igwefoto ahụ na - eyi na ha enweghị ike ịchekwa data edekọ. Ọ bụrụ na ha ebibie ma hichapụ data ochie ahụ? Ọ ga-abụkwa ihe ọjọọ maka ngalaba ahụ. Anyị nwere ike ịhụ ka ikpe ochie gbara afọ na-emeghe na mberede. Ya mere, ha enweghị ike ịme usoro a ma hichapụ data ochie. Ha kwesiri idobe data niile nke bụ nnukwu nsogbu maka ngalaba ahụ.
Anyị ahụkwala na igwefoto ahụ yi n'ahụ nwere oke ihe ha nwere ike idekọ n'otu oge. Ihe a dị ka mmachi oke maka igwefoto. Ọ ga-enye ndị isi nsogbu. Ka anyị were ya na onye uwe ojii na-achọ nyocha. Igwefoto na-edekọ akụkụ ahụ niile mana dịka ọ na-abanye na akụkụ kachasị mkpa, oke igwefoto zuru oke ma ọ na-akwụsị idekọ. Yabụ, nke a bụ nnukwu mmachi nke kamera ahụ na-eyi na-enye ya ọghọm.
Ihe ọzọ na-emetụta arụmọrụ nke igwefoto eyi n'ahụ ya bụ oge batrị. Oge ụfọdụ, igwefoto eyi uwe na-etinyere n’akụkụ ihu uwe ndị uwe ojii. O yighị ka à ga-akwụ ya ụgwọ oge niile ọ ga-eji batrị na-agba ya. Oge a batrị ga-anọ ogologo oge. Mana enwere ihe ndekọ ogologo oge na-ewekarị oge, igwefoto a na-agbadata batrị ha. Iji chajie ndị a, batrị ga-apụrịrị n'okwu ahụ. Nke a bụ nnukwu mmachi nke igwefoto ndị a kwesịrị idozi.
Ikikere na iji otu kwesiri:
Otu n'ime ajụjụ kacha mkpa ndị uwe ojii na-eche ihu na ịtụle Ara Worn Cameras bụ otu esi amata ụdị ndị ọrụ ndị uwe ojii kwesịrị ịdekọ.
Ọ bụrụ na-enweghị ụzọ kwesịrị ekwesị, ndị ọrụ uweịja nwere ike iji kamera ahụ wee gaa ebe ọ na-agaraghị eji ha, n'otu oge, ha gaara agbanyụọ kamera ha ebe ọ dị mkpa idekọ. Nke a nwere ike ibibi ọtụtụ ihe dị mkpa na ama ahụ.
Anyị enweghị ike ikwu kpọmkwem na nke a bụ mmachi igwefoto ahụ mebere ya mana ọ bụ mmachi ngalaba ahụ na-eji ya.
Onwere uzo uzo abuo emere gosiputara n'ọtụtụ ihe omumu ma abia na otu esi eme ihe. Otu ụzọ bụ ịchọ ndị uweojii ka ịdekọ akụkọ niile ha na ọha na-enwe, gụnyere ọ bụghị naanị n'oge oku maka ọrụ kamakwa n'oge mkparịta ụka na ndị nkịtị. Dabere na otu Nzukọ Ọha, ịchọ ndị ọrụ ka ịdekọ mkparịta ụka ọ bụla na ọha na eze nwere ike imebi ikike nzuzo nke ndị otu ma mebie mmekọrịta ndị uwe ojii. Ya mere, nke a nwere nnukwu mmiri azụ. Ọtụtụ n'ime ndị akaebe hụrụ onwe ha n'anya ka ịhụghị onwe ha na igwefoto ma ọ bụ edekọ. Nke a na - enye nsogbu ndị uwe ojii ebe ha na - ajụ ha ajụjụ.
Uzo nke abuo:
Nke abụọ, ụzọ a na-ahụkarị bụ ịchọ ndị ọrụ iji mee ka igwe ha rụọ ọrụ naanị mgbe ị na-aza oku maka ọrụ yana n'oge mmemme metụtara iwu dịka njide, nyocha, nkwụsị okporo ụzọ, ịgba ajụjụ ọnụ, na ịchụso. Ordingdekọ ihe ndị mere na ebe mpụ dị ndụ kwesịrị inyere ndị uwe ojii aka ijide nkwupụta enweghị atụ nke nwere ike ịba uru na nyocha ahụ.
Ojiji nke Body Worn Cameras na-enye ndị uwe ojii ohere idekọ ọnọdụ dị mwute, kamakwa ịdekọ n'ime ụlọ nkeonwe mgbe ị na-ejide ma ọ bụ na-eme nyocha. Banyere nke a, ụfọdụ ndị mmanye iwu eweghara ọnọdụ na ndị uwe ojii nwere ikike idekọ n'ime ụlọ nkeonwe ma ọ bụrụhaala na ha nwere ikike ịnọ ebe ahụ. N'ihi nke a, na - akpaghasị nzuzo nke ọtụtụ ndị adịghị mma maka ndị uwe ojii.
Uzo nke igwe ndi uwe ojii gbanwere ikpeazụ: September 26th, 2019 by admin
Nzuzo 2012 4 Echiche Taa